Maxay ahayd sababtii uu Bruno Fernandes la ooyay markii uu ku biiray Kooxda Manchester United? – Gool FM
(Manchester) 04 Juun 2020. Xiddiga khadka dhexe kaga ciyaara kooxda Manchester United ee Bruno Fernandes ayaa sheegay inuu ilmeeyay markii uu ka war helay in u dhaqaaqistiisa garoonka Old Trafford ay guuleysatay.
Xiddiga reer Portugal ayaa bishii Jannaayo isaga soo tagay kooxda Sporting CP isagoo u soo hayaamay Red Devils oo muddo baacsaneysay saxiixiisa.
Fernandes oo barta Instagram-ka muuqaal toos ah la wadaagaayay Mario Djurovski ayaa sheegay inuu dareemayay cabsi wayn.
“Waxay ahayd riyo rumowday, waliba riyo wayn” ayuu yiri kabtankii hore ee Kooxda Sporting Lisbon.
Waxa uu sidoo kale qiray in ka ciyaarista horyaalka Premier League iyo ka mid noqoshada Manchester United ay noqotay qaybta ugu wayn xirfaddiisa.
“Markii aan helay wicitaan i leh: ‘Bruno waxaad heshay fursaddii aad ugu dhaqaaqi lahayd Manchester, waxaan wacay xaaskeyga, walaalkey iyo walaashey, waana ooyay.
“Waxaan la ooyay farxad darteed, nolosheyda oo dhan waxaan u dagaallamayay sidii aan ugu ciyaari lahaa kooxdan, markii aan fursadda helayna, waxaan ku qaatay labada gacan si aan riyadeyda u rumeeyo” ayuu yiri Bruno Fernandes.
Xiddigii hore ee Sampadoria ayaa billaabasho qurux badan ka sameeyay Old Trafford ka hor inta aysan kubadda cagta hakad u galin faafitaanka Coronavirus awgii, isagoo dhaliyay saddex gool, sidoo kalena caawiyay afar kale kaddib sagaal kulan uu u ciyaaray kooxda uu hoggaamiyo Tababare Ole Gunner Solskjaer.